“Waxaa Nahay Rajo La’aan” Diego Maradona Shaki Galinaya Rajada Argentina Ee Koobka Aduunka La’aanta Lionel Messi. - Wargane News
Home Sports “Waxaa Nahay Rajo La’aan” Diego Maradona Shaki Galinaya Rajada Argentina Ee Koobka...
Halyeyga qaranka Argentina Diego Armando Maradona ayaa shaki galinayaa hadii qarankiisa ay soo gaari karaan Russia oo lagu qaban doono koobka Aduunka sanadka 2018 madama ay ciyaari doonaan kulamada u haray iyadoo uu ka maqan yahay Lionel Messi.
Xulka labada jeer heysta horyaalka aduunka ayaa kaalinta 5-aad kaga jira kala horeynta wadamada koonfurta ameerika, wuxuuna gali doonaa Play off hadii ay sidaas ku dhameystaan.
Argentina kaliya 6-jeer ayey guuleysteen 14-kulan oo ay ciyaareen isreeb-reebka koobka Aduunka wadamada koonfurta America.
Si kastaba FIFA ayaa ganaax afar kulan ah kusoo rogtay kadib markii ay Lionel Messi ku eedeeyeen inuu aflgaado u gesytay calanhayaha kulan ay 1-0 ku dhufteen Chile, wuxuuna seegay ciyaartii ay 2-0 guuldaro ah Argentina kala kulantay Bolivia.
Maradona oo hogaaminayay qaranka Argentina e 1986 ayaa su’aal weyn galiyay hadii Argentina ay usoo bixi karto koobka Aduunka 2018.
“Waxaa nahay rajo la’aan” Ayuu yiri Diego Armando Maradona oo la hadlayay Radio Rivadavia.
“Messi La’aan, shaki ayaan ka qabaa inaan soo gudbi karno” Ayuu yiri halyeeygii hore Argentina.
Argentina ayaan wali magacaabin macalinkii badali lahaa Bauza, waxaana kaliya u haray afar kulan oo ay ku xiran tahay nolosha Argentina ee koobka Aduunka waana Uruguay, Venezuela, Peru iyo Ecuador.